Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ဦးပိုင်ဆိုတာဘာလဲ၊ဘယ်လဲ?
December 4, 2012 — Burma Democratic Concern (BDC)
အားလုံး ကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့-ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း
By သုတေသီ မောင်တင့်တယ်
၁။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုအချိန်က န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့) အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ…
အရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇/၉၀ ဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့၊ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း တပ်မတော်ကတည်ထောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
၂။ “ဦးပိုင်” စနစ်ဆိုသည်မှာ မိမိအရင်းထက် အဆပေါင်းများစွာပိုသော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကို ဖြန့်ခွဲချုပ်ကိုင် သည့် လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ဖြစ် သည်။ စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် အထူးကုမ္ပဏီတခုအနေဖြင့် ၎င်းမှ အပြည့်အ၀ပိုင် ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီခွဲများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အထူးအခွင့်အရေးကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများမှာမူ ဤအခွင့်ထူးကို မခံစားရချေ။
● ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏ
- ဦးပိုင်က အပြည့်အ၀ပိုင်သည့်လုပ်ငန်း။ ၃၅ ခု
- ဦးပိုင်နှင့်ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်း။ } ၇ ခု
- ဦးပိုင်၏လုပ်ငန်းခွဲများ။ ၉ ခု
- ဦးပိုင်နှင့်ချိတ်ဆက် (သို့မဟုတ်) ဦးပိုင်မှ ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ထားသည့် စီမံကိန်းများ ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
World Precious Gem Co. Ltd.၊ နီလာရိုးမကုမ္ပဏီ၊ အာရှအဖိုးတန်ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မြန်မာစည်သူရတနာကုမ္ပဏီ၊
ဇော်ဇော်ကုမ္ပဏီ၊ ရှမ်းရိုးမ ကုမ္ပဏီ
ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း (မိုးကုတ်-မိုင်းရှူး-နန်းယား)၊ သပိတ်ကျင်း ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မော်ချီး ခဲသတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း။
မြန်မာ အင်ပီရီယယ်ဂျိတ် ကုမ္ပဏီ လိမိတက်
ရှယ်ယာမိသားစုကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ Gold Gade Gems Co.၊ နီလာရိုးမ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဆားမှော်ကျောက်စိမ်းတူးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။
Myanmar Jade International
Myanmar Segye International Ltd.
Myanmar Unimix International Ltd
Hwa Fhu International Ltd.
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း
Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd.
Red Ruby စီးကရက်စက်ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)၊
စီးကရက်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ ဘီယာဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်း၊ စားသုံးဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ မော်တော်ကား၊ သံမဏိ တို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပဲနှင့်ပဲမျိုးစုံ၊ အဝတ်အထည်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ စီးကရက်နှင့် ဘီယာဗူးများ တင်ပို့ခြင်း လုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုလုပ်ငန်း
ပါရမီပို့ဆောင်ရေး၊ ရှမ်းမလေး၊ ရွှေမန်းသူ၊ ပုသိမ်သူ
ဘတ်စ်ကားလိုင်းလုပ်ငန်း၊ အဝေးပြေးခရီးသည် လုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
န၀ဒေးဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လီမိတက်
Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, န၀ဒေး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား အေဂျင်စီ
Singapore – Fraser & Neave ကုမ္ပဏီ
ဘီယာနှင့် အရက်ချက်လုပ်ငန်း(မြန်မာဘီယာ၊ အေဘီစီစတောက်ဘီယာ၊ တိုက်ဂါးဘီယာ)
တောင်ကိုရီးယား ပိုဟွန်နှင့်သံမဏိ ကုမ္ပဏီ
Myanmar Nouveau Co Ltd
Myanmar Cement Co.
Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindo
ဟံသာဝတီ ဂေါက်ကွင်းနှင့် မြို့တော်ကလပ်
ပဲခူးဒေသ ဟော်တယ်နှင့် ဂေါက်ကွင်းလုပ်ငန်း
Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd.
South Korea – Samgong Industrial Co.
Korean Gas Company with Daewoo
Mamee Double Decker Ltd.
Myanmar Tokiwa Corporation
ခဲတန်နှင့်အလှကုန် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေး
Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd.
Diamond Dragon Co. Ltd.
Berger Paints Manufacturing Ltd
Singapore – Berger International
မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Myanmar Forward Support Co.
စင်္ကာပူ– SKS Marketing Pte.
NTCY Fair Price Cooperative Ltd
တော်ဝင် ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ် စက်ရုံ၊
ပီနံအိတ်လုပ်ငန်း၊ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (ကျောက်ဆည်)
ဂရင်းနိုက် ကျောက်ပြား စက်ရုံ
ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ
ကြက် ငါး ပုဇွန်မွေးမြူရေးနှင့် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငှက်သိုက် ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်း၊
သံမဏိစက်ရုံ (အောင်လံ) (မြောင်းဒကာ) (အင်းစိန်ရွာမ) (မြင်းခြံ)၊
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (မြိုင်ကလေး) (ကျောက် ဆည်)၊
သကြားစက်ရုံ (ကန့်ဘလူ) (တောင်စဉ်အေး) (အောင်လံ) ၊
SIGMA ဝါယာစက်ရုံ (လှိုင်သာယာ)၊
ဂေါဒန်မိုင်း (သီပေါ) (ထုံးဘို)၊
မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံ ကော်ပိုရေးရှင်း၊
Northern Star Minerals Production & Trading Co., Ltd.၊
Tyazhpromexport Co., Ltd.
Myanmar Hyosing Corp. (SK Network Corp.)
Grade Nine Co., Ltd.
Myanmar Tractors Ltd.
K-Y Kyaw Kyaw Co., Ltd.
Zuri Co., Ltd.
Moon Ray Co., Ltd.
VSV Asia Co., Ltd.
Superium Enterprise Co., Ltd.
JFE Co., Ltd.
Sojit Co., Ltd.
Polyice Co., Ltd.
PEG Co., Ltd.
Chem Tech Co.
IE Petroleum Products Co., Ltd.
Flying Sun Moon Co.
Tractors World Co.
ဒဂုံဝင်းဝင်း၊ သံလွင်၊ မြန်မာကိုင်ဒို၊ ငွေဆင်
၁၀။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး၊ ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆော င်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး တို့ကလည်း တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
တပ်မတော် ချည်မျှင်စက်ရုံ (မိတ္ထီလာ)၊
တပ်မတော် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (မင်္ဂလာဒုံ)၊
တပ်မတော် မိုးရေကာဖျင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊
တပ်မတော် ရှူးဖိနပ်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊ တပ်မတော်ချည်မျှင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊တပ်မတော်ဘောလုံးစက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်သတ္ထုပစ္စည်းစက်ရုံ(အုတ်ကျင်း)၊ တပ်မတော် သားရေစက်ရုံ (မန္တလေး)၊ တပ်မတော် ဆေးဝါးစက်ရုံ (မှော်ဘီ) ၊
တပ်မတော် လ္ဘက်စက်ရုံ (နမ့်ဆန်) (သံတောင်) (ရန်ကုန်)၊
တပ်မတော် ပုဇွန်ငါးပိနှင့်ငါးချဉ်စက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်ဘီစကွတ်နှင့်ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊
တပ်မတော်ရမ်စက်ရုံ (ရွှေပြည်သာ)၊ တပ်မတော်ဂျုံမှုန့်စက်ရုံ (သြဘာ)၊
● စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်အပေါ် သုံးသပ်ချက်
၁၅။ နိုင်ငံတော်အာဏာကို စစ်တပ်ဖြင့် သိမ်းယူထားချိန်တွင်စစ်ဗျူရိုကရက်များ၏ စီးပွားရေးအတွက် အစစအရာ ရာ အာမခံချက်ရှိနေသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကြိုက်သလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ ကြိုက်ရာနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်နိုင် သည်။ ဖုံးချင်သလောက်ဖုံး၊ ထုတ်ပြောချင်သလောက် ထုတ်ပြောနိုင်သည်။ စေတလုံးပိုင်နေကြသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပင်စင်ဥပဒေဆိုသည်မျိုး အပါအ၀င် ၎င်းတို့ထင်သလို ဥပဒေများထုတ်ပြန်ပြီး ကြိုက်သလိုခံစားနိုင်ကြသေး သည်။
၁၆။ သို့သော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကာလပြီးပါက အရပ်သားတချို့ပါဝင်သော အစိုးရသစ်လက်သို့ အာ ဏာကို လွှဲရမည်လိုလို ဖြစ်လာသောအခါတွင်မူ ယခင်အခွင့်အရေးမျိုးများအတွက် အာမခံချက်များနည်းလာနိုင် သည်။ ထို့ကြောင့် စစ်တပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းတခုလုံးအတွက် (အထူးသဖြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မိသားစုအတွက်သာ) စီးပွားရေးအရ လဒတသောင်းနားနိုင်သော သစ်ပင်ကြီးတပင် ရှိဖို့လိုလာသည်။ အနည်းဆုံး ခြေမမြဲတောင် လက်တော့ မြဲစေရမည်။ ဤသို့သောဟာကွက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်မှာ ကိုယ့်လက်ထဲအာဏာရှိတုန်း စီစဉ်ဖန်တီးရလျှင် အလွယ်ဆုံး အကောင်းဆုံးပင် မဟုတ်ပါလော။
၁၇။ ထို့ပြင် ဤဦးပိုင်လီမိတက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရရှိထားသော ငွေမည်းများကို တရားဝင်အောင် ပွဲထုတ်နိုင်ပေတော့မည်။ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်စသည့် နိုင်ငံများမှ စစ်အုပ်စုများ လုပ် လေ့ရှိသလို အောက်ခြေကို စားကြွင်းစားကျန်လေးများနှင့် ချွေးသိပ်ရန်စီစဉ်ခြင်းပင်။
၁၈။ နောက်ပြီး မူလက ကြေးစားဆန်ဆန် လစာဆိုသည့်အနှောင်အတဲ တခုထဲနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်တပ်အား စည်းလုံးစေရန် နောက်ထပ်သံယောဇဉ်အနှောင်အတဲတခု ထပ်ဖြည့်လိုက်ခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ တပါတည်းတွင် တပ်ထဲမှာပဲ ဆက်ရှိရှိ၊ တပ်အပြင်မှာပဲရှိရှိ အားလုံးတလှေထဲစီး၊ တခရီးထဲသွားချည်းဘဲ၊ ထို့ကြောင့် စစ်အုပ်စုထိပ်သီး ပိုင်း၏ တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့်ကို နာခံရန် အမြဲအသင့်ရှိရေးဆိုသော စိတ်ဓါတ်ကို ခံစားခွင့်ပြပြီး ရိုက်သွင်းပေးနေခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည့် နောက်အကြောင်းတကြောင်းမှာ နောင်မှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အရပ်သားအစိုး ရအပေါ်တွင် စစ်အုပ်စုနှင့်စစ်တပ်က ဘက်စုံ၌ မားမားကြီးမိုးနေနိုင်အောင် ပြင်ဆင်နေသည့် အစီအစဉ်များထဲမှ တခုဖြစ်သည် ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ နောင် မည်သည့်အစိုးရတက်လာလာ စစ်အုပ်စုနှင့် စစ်ဗျူရိုကရေစီယန္တယား မှာ စစ်ရေးအရ (ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးအရပါ) မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုရသော အင်အားတရပ်သာမကတော့ဘဲ စီးပွားရေးအရပါ အသိအမှတ်ပြုနေရာပေးရသည့်အဖြစ်မျိုး ဆိုက်လာပေရော့မည်။
၁၉။ ဤစစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် လက်တွေ့တွင် နဂိုကမှ အဆင့်အတန်း အင်မတန်ကွာခြားနေသော စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းနှင့် အောက်ခြေတို့အား ပိုမိုကွာခြားစေမည်သာဖြစ်ရာ ရေရှည်တွင် အောက်ခြေက ထိပ်ပိုင်းကို မကျေနပ်မှုများ ပေါ်ပေါက်စရာ အကြောင်းတကြောင်းလည်း ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာသည်။ အချို့တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့မှူးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ရှယ်ယာထည့်ဝင်ရေးရည်မှန်းချက် ကျပ်သိန်း(၅၀၀) သိန်း (၃၀၀) စသည်များပြည့်မှီရေးအတွက် အောက်ခြေ စစ်သည်များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေးတို့အား ဖြေရှင်းမှုမပြုနိုင်တော့ဘဲ (၁၂)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည့် ဦးပိုင်အမြတ်ငွေများဖြင့် အစုရှယ်ယာများ။
၁၉။ ဤစစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် လက်တွေ့တွင် နဂိုကမှ အဆင့်အတန်း အင်မတန်ကွာခြားနေသော စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းနှင့် အောက်ခြေတို့အား ပိုမိုကွာခြားစေမည်သာဖြစ်ရာ ရေရှည်တွင် အောက်ခြေက ထိပ်ပိုင်းကို မကျေနပ်မှုများ ပေါ်ပေါက်စရာ အကြောင်းတကြောင်းလည်း ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာသည်။ အချို့တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့မှူးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ရှယ်ယာထည့်ဝင်ရေးရည်မှန်းချက် ကျပ်သိန်း(၅၀၀) သိန်း (၃၀၀) စသည်များပြည့်မှီရေးအတွက် အောက်ခြေ စစ်သည်များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေးတို့အား ဖြေရှင်းမှုမပြုနိုင်တော့ဘဲ (၁၂)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည့် ဦးပိုင်အမြတ်ငွေများဖြင့် အစုရှယ်ယာများ ထပ်မံဝယ်ယူပေးခဲ့ရပါသည်။ တပ်ရင်းမှူးများအနေဖြင့် မိမိ၏ရာထူးတက် လမ်းအတွက် အစုရှယ်ယာသတ်မှတ်ချက်များပြည့်မှီရေး အသဲအသန်ရှာဖွေခဲ့ရပါသည်။ ဆိုးရွားသည့်အကျိုးရလဒ်မှာ တပ်မ ၁၁ ရှိ ခမရ (၂၁၄/၂၁၅) တပ်ရင်းမှူးတချို့က စစ်သည်များ၏ ဘဏ်စုဆောင်းငွေများကို ကာယကံရှင်များ မသိ လိုက်ရဘဲ ဦးပိုင်ရှယ်ယာများဝယ်ယူရေးအတွက် တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးများကို လျှို့ဝှက်ထုတ်ယူစီစဉ်ခိုင်းလိုက်သဖြင့် ပေါက်ကြားသွားပြီးပြဿနာများ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်လည်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးများ စက်ရုံမှူး အဖြစ် တာဝန်ယ
Credit to: http://bdcburma.wordpress.com/2012/12/04/who-are-the-union-of-myanmar-economic-holding-limited-umehl-commonly-known-as-u-paing/